YaseYorkshire Terrier - lo mlingane-inja, ulungele ukwabelana ngamalungu entsapho ukuba nomoya omhle nothando. York uvakalelwa ngomsindo kwaye xa umninimzi ufuna ukuba yedwa, inja ayiyi kuphazamisa kwaye ithathe amathoyizi akhe. U-Beaver Yorkshire unokunqoba intliziyo yomntu wonke - bobabini kunye nabantu abadala.
Thenga i-beaver yaseYorkshire
Unokuthenga abathengi abadala abakhulileyo baseYorkshire terrier. Iintsana ezinjalo sele ziqhelekile kwiinkqubo zezempilo nezindlu zangasese. Kwiziko elinjalo unokuncedwa naliphi na ixesha ngononophelo nangonyango, iingcebiso, iingcebiso kumxholo.
IYorkshire Terrier yenye yezinto ezikhethwa kakhulu namhlanje. IYorkshire inomtsalane omkhulu, ngoko akukho mntu uyamangalisa xa umntu ebona ngento ekhishwe ngumntu oshishino okanye ezandleni ze-biker. I-Terrier iyangena ngokukhawuleza kwisigqi sokuphila. Akuyimfuneko ukuyikhupha ngaphandle kwitalato, ifaneleke ukuba i-toilet yile yangasese okanye i-diaper. Vumelani ukuba akumnandi kakhulu ukuhamba inja ebanda okanye kwimvula, ingakumbi ngosuku, xa kusasa ufuna ukulala ixesha elide.
Awukwazi ukwesaba ukuhlambululeka kwezinto ngaphakathi kwendlu, luhlobo oluthile olunjalo, olubangelwa ukungabikho kwengubo engaphantsi kolwandle alukhangeli ngaphakathi kwindlu. Ngenxa yesi sizathu, iYorkshire ifanelekile kubantu abanokugula. Akayi kuzisa inkathazo enkulu ekuhambeni, kuba iinqwelo-moya ezininzi zivumelekile ukuba zithathe inja encinane ebhodini, kwaye ezinye ihotele zivumela ukulungiswa kwabanikazi kunye nalolu hlobo lwezinja, kuyafana nokutya nakwiivenkile.
Kukho iintlobo ezininzi zeenwele ze-york, zinceda kakhulu ukunakekelwa koboya bezinja, ukuba abayidingi imbonakalo yomsebenzi. Nangona ubukhulu becala, i-Yorkshire Terrier inengqondo elinganisiweyo kunye nesimo esinamandla. Kwaye inkcazo yenja encinci yokuthuthumela eyenza i-puddles yoyiko, ayikho malunga ne-Yorkshire terrier.
Inzuzo ebalulekileyo ye-Yorkshire terrier kukuba akabi nomona, unothando, unobungane kakhulu, ngoko ke kufanelekile kwiintsapho ezinjengezingane ezincinci. I-Yorkshire Terrier ivuyisa kunye novuyo kwintsapho. Kuyinto inokuzithemba, inqabileyo, injabulo neyoyingqondi. Ubunjalo bendawo yaseBevershire yaseYorkshire ayilunganga kwaye imfundo yale nja imele ijongane nomntu onokulinganisela, omdala. Inja ibonisa umdla kwizinto ezincinane, ngokukhawuleza isetyenziselwa izilwanyana ezintsha nabantu. Ukubukela ku-yorka kwakungumntu ofanelekileyo, ufuna kwimfundo ukubonisa ubunzima kunye nomonde. Inja engabonakaliyo, inika ilizwi xa ifuna ukuqwalasela umnini wayo. Njengeyiphi inja idinga ukuhamba ngaphandle.
I-Puppies Yorkshire terrier ukusuka kwiinyanga ezi-3 ukuya kwi-4 ubudala ubudala idla amaxesha amane; ukususela kwiinyanga ezi-4-10, zondliwa kathathu ngosuku, emva kweenyanga ezili-10, kuyimfuneko ukunciphisa ukondla ukuya kumaxesha ama-2 ngosuku. Kufuneka ukondle kusasa nangokuhlwa. Ukutya kokutya kwe-biver-york liqukethe i-50% yemifuno kunye ne-carbohydrates, i-50% yeeprotheni. Ukutya komgqugquzeli we-terrier kubandakanya: i-porridge (buckwheat, ilayisi), inkabi ebilisiwe, iziqhamo, imifuno eluhlaza, umdlalo, isibindi, i-cottage cheese kunye ne-vitamin supplement. Kuyinto engathandeki ukunika amazambane, ubisi, i-sausages, iimveliso zobisi ezinqatyisiweyo (ushizi, ibhotela), inyama yengulube. Ngenxa yoko, ukuhlula kunye noboya beboya, ulusu olukhuni, i-dermatitis, i-rash, i-indigestion ingaba khona. Sitshintshela ukutya okomile ngokukhawuleza, de kube zitshintshwe ngokupheleleyo ngokutya kwendalo.
I-beerver ye-terrier inomikhono omdala oqaqambileyo, ifuna ukunakekelwa rhoqo. Iboya kufuneka idibaniswe imihla ngemihla. Iibhulashini kufuneka zenziwe ngeengulube zehagu okanye ihashe. Ukudibanisa uboya obunamathengi sebenzisa i-horny yensimbi, iimbumba zokhuni. Ukuba inja iyahlanjululwa kufuneka ihlambe. Kodwa ukuhlamba rhoqo kunobungozi, banefuthe elibi kwimeko yengubo. Ukuhlamba iYorkes awuyidingi ngaphezu kwezihlandlo ezi-2 kwinyanga emanzini ashushu kunye ne-shampoo. Yomisa ngeerarryer okanye ithawula. Emva kokuhamba, hlamba isisu sakho kunye neenyawo ngamanzi ngaphandle kwe-shampoo kunye nesepha.
Ukuqwalasela rhoqo iindlebe. Ukudibanisa nokunciphisa iingubo ezindlebeni, ukukhupha iinwele ezifa kwi-canal endlebe kwaye uzihlambulule rhoqo. Yinqumle amacwecwe, ususe ulwabiwo kumacandelo akho amehlo.
Unokukhetha njani i-puppy yaseJamani uMalusi?
Inkcazo ye-French Bulldog
Inja yoMalusi waseMpumalanga Asia
Indlela yokufumana iiflanzi kwi-aquarium ngokufanelekileyo
Indlela yokufundela ikati enkulu endala?
Hamsters, ukunakekelwa, ukondla, umxholo
Izinja zokuqeqesha: iindlela ezahlukeneyo
Indlela-2: UPaulina Andreeva uza kwenza indima ephambili esikhundleni seKonstantin Khabensky
I-recipe ye-pie kunye neziqhamo
Iholide yomnyaka omtsha kumntwana
Indlela yokukhulisa umntwana onoyolo
I-jelly esuka kwi-champagne kunye ne-raspberry
Umbhali wezingane uCharlotte Bronte
Imilenze yamantombazana enhle kwaye enhle
Isibilini saseBurdock: usindiso lweenwele ezomileyo kunye ezinobunzima ekhaya
Iipatheni ezivulekileyo kwi-pancake ye-pan-coce,
I-Apple cider iviniga kunye nokusetyenziswa kwayo ekulahlekeni kwesisindo
Kunokuphatha unyango lwe-bronchitis?